करीब एक दर्जन वाणिज्य बैंकको कुल नाफा अर्बमाथि, १५ अर्ब बढि लाभांश! - Nepal News - Latest News from Nepal
करीब एक दर्जन वाणिज्य बैंकको कुल नाफा अर्बमाथि, १५ अर्ब बढि लाभांश!
By nepalnews	 On Aug 7, 2017
काठमाडौं,२३ साउन। हाल सम्म गत आव २०७३र७४ को वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका १२ वाणिज्य बैंक सबैको नाफा अर्ब माथी भएको छ ।
सोमवार वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको लक्ष्मी बैंकको नाफा पनि १ अर्ब भेटेसँगै हालसम्म सबै १२ बैंकको नाफा अर्ब माथी देखिएको हो ।
गत आवको तेस्रो त्रैमाशमा नै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि बिकास बैंक, एभरेष्ट बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले अर्ब माथीको नाफा देखाएकाले अर्ब नाफा गर्ने बैंकहरुको सूची थप बढ्ने पक्का भएको छ । यसो भएमा सञ्चालनमा रहेका कुल २८ वाणिज्य बैंक मध्ये १६ वटाको नाफा अर्ब माथी पुग्ने निश्चित देखिएको छ ।
नाफा रकमको आधारमा सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउनेमा नबिल र ग्लोबल आइएमइ बैंक रहेको छ । यी बैंकले क्रमश स् ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ र २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् ।
धेरै नाफा देखाउन राइट ब्याकको आधार लिने बैंकहरु
धेरै नाफा गरेको देखाउन केही बैंकहरुले प्रशस्त राइट ब्याकको आधार पनि लिएका छन् ।
१ अर्ब ७६ करोड नाफा गरेको प्रभु बैंकले यसअघि जोखिम वापत राखेको १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ नै राइट ब्याक गरेको छ । त्यस्तै, १ अर्ब २१ करोड नाफा गरेको सिटिजन्स बैंकले पनि ९० करोड १३ लाख राइट ब्याक गरेको छ ।
यता, ग्लोबल आइएमइ बैंकले भने नाफा उच्च देखाउन यसपटक प्रावधान नै कम राखेको छ । बैंकले ३० करोडले प्रावधान कम गरेको छ भने ३२ करोड राइट ब्याक गरेको छ । एनआइसी एशियाले ४२ करोड ७९ लाख फिर्ता ल्याएको छ ।
अन्य केही बैंकहरुले पनि ५० करोड रुपैयाँसम्म राइट ब्याक गरेका छन् । कतिपयको नाफाको आधार भने व्यवसाय नै रहेको देखिएको छ ।
१५ अर्ब बढि लाभांश १
वित्तयि विवरण प्रकाशित गरेका १२ बैंकले मात्रै लगभग १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लाभांश वितरण गर्न सक्ने देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै लाभांश नबिल बैंकले दिन सक्ने देखिएको छ । हालको चुक्ता पुँजी र नाफाको आधारमा यो बैंकले करिब ४५ प्रतिशत लाभांश दिनसक्ने सम्भावना रहेको छ ।
यसपटकको नाफा पछि सबैभन्दा कम लाभांश क्षमता लक्ष्मी बैंकको देखिएको छ । बैंकले करिब १० प्रतिशत हाराहारीमा लाभांश वितरण गर्न सक्ने देखिएको छ । बैंकहरुको सञ्चितीमा बाड्न योग्य थप रकम भएमा भने यो लाभांश दर थप बढ्न सक्छ ।
बैंकहरुले यसपटकको नाफाबाट सञ्चितमा राख्नुपर्ने २० प्रतिशत बराबरको रकम र सामाजिक दायित्वको लागि छुट्याउनु पर्ने १ प्रतिशत अलग्याएर मात्र लाभांश वितरण गर्न पाउछन् ।
चुक्ता पुँजी पुग्न १७ अर्ब कम
यी १२ बैंकलाई आधार लिने हो भने बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ९कुल ९६ अर्ब रुपैयाँ० पुग्न बैंकहरुले थप १७ अर्ब पुर्याउनु पर्ने हुन्छ ।
बैंकहरुले १५ अर्ब लाभांश दिन सक्ने देखिएकोले करीब २ अर्ब रकम अपुग हुन सक्ने देखिन्छ ।
तर, कम्पनीहरुले समानुपातिक रुपमा पुँजी थपेर १७ अर्ब जुटाउनु पर्ने अवस्था भने होइन । कम्पनीगत आधारमा हेर्दा भने ग्लोबल आइएमइ बैंकको पुँजी ८ अर्ब पुगिसकेको छ । एनएमबी बैंक र प्रभु बैंकले भने क्रमशः ३ अर्ब र २ अर्बले चुक्ता पुँजी पुर्याउन पर्ने हुन्छ ।
सिद्धार्थ बैंकले हकप्रद वापतको कल इन एड्भान्स रकम बराबर १ अर्ब ३७ करोड समेत राखेपछि ६ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ ।
धेरैको सेयरमा प्रतिफल घट्यो
सानिमाको सेयरमा प्रतिफल ९आरओइ० आधाले घटेर १४।३५, सनराइजको १२।५३, सिटिजन्सको १६।४०, प्राइम १९।९६, माछापुच्र्छे १४।२७ र सिद्धार्थ बैंक १५।८० मा सिमित भएको छ । विजयराज खनाल अनलाईन खवर
सजिना खनाल टिन प्रिन्सेस बन्न सफल